+95 9772 45561 / +95 9772 45562
Top Weekly Withdrawals Kaun****K 20,000,0002021-09-24 06:08:37 phon****K 15,000,0002021-09-23 06:57:38 AUNG****K 10,100,0002021-09-24 03:32:41
အသင်းဝင်ဖြစ်ရန် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် စတင်ပါ။
မိမိ ကစားမည့်ကစားပွဲများကို ရွေးချယ်ပါ။
ကစားပွဲများကို စတင်ကစားခြင်းဖြင့် အနိုင်ငွေများကိုရယူပါ။
သင့်၏ အနိုင်ငွေများကို ထုတ်ယူပါ။
Q> အသင်းဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရန် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲ?
အသင်းဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရန် ဤနေရာ ကိုနှိပ်ပါ။
လူကြီးမင်းတို့၏မှတ်တမ်းများကို ဖြည့်စွက်ပြီးနောက် ကျွန်တော်တို့မှစပေါ်ငွေထည့်သွင်းရန် ဘဏ်အကောင့် အသေးစိတ်ကိုဖော်ပြထားမည့်အသင်းဝင်များ ဆိုဒ်ထဲသို့ဝင်ရန် အပေါ်တွင်ရှိသောအကောင့်နာမည် နှင့်လျှို့ဝှက်နံပါတ်တို့ကိုလူကြီးမင်းတို့၏အီးမေးလ်သို့ပို့ပေးမည်ဖြစ်သည်။
အနည်းဆုံးစပေါ်ငွေ 20000 ကျပ် တင်ရပါမည်။
Q> ဘယ်ဘဏ်ကိုအသုံးပြူ နိုင်မလဲ?
ဧရာဝတီဘဏ်(AYA Bank),KBZ Bank,CB Bank အကောင့်ရှိသူများအားလုံး အသုံးပြုနိုင်သည်။
တစ်ပတ်(၇) ရက် မနက် (၁၀)နာရီ မှ ည(၁၁)နာရီ အထိငွေသွင်းငွေထုတ် ၀န်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။
Q> “ဘောဒိုင်” ဆိုဒ်နှင့်ဘယ်အချိန်တွေမှာ ကစားခွင့်ရနိုင်မလဲ?
လူကြီးမင်းတို့ထံတွင် အင်တာနက်ရှိသည့်ကာလပတ်လုံး ၂၄ နာရီအချိန်မရွေး ကစားနိုင်ပါသည်။
Q> အနည်းဆုံးထိုးကြေး နှင့် အများဆုံးထိုးကြေး က ဘယ်လောက်လဲ?
Balldyne Register လုပ်ပြီး Member အကောင့် ဆိုဒ်ထဲတွင် ၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
အကောင့်ဖွင့်ခြင်း · Soccer · Casino · Promotion · မည်သို့ကစားသနည်း · ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ရန် · Facebook
BALLDYNE © 2015-2016